बुलबुल नेपाल | आईसीसी वरियताः सोमपालको २२ स्थान सुधार पारस, बसन्त र सन्दीप अवस्था कस्तो ?
शनिबार ०७, बैशाख २०७६ ००:५५
आईसीसी वरियताः सोमपालको २२ स्थान सुधार पारस, बसन्त र सन्दीप अवस्था कस्तो ?
काठमाडौं, माघ २८ । नेपाली क्रिकेट टोलीका महत्वपूर्ण सदस्य सोमपाल कामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ले जारी गरेको टी–२० क्रिकेटको बलिङ बरियतामा २२ स्थान सुधार गरेका छन् । यसअघि ९२ औं स्थानमा रहेका उनी २२ स्थानमाथि उक्लिदै ७० औं वरियतामा आइपुगेका हुन् । यो उनको करिअरकै सबैभन्दा राम्रो उपलब्धी हो ।
सोमपालले ४०९ रेटिङ अंक पाएका छन् । सोमपाल अलराउण्डरतर्फ पनि ५१ औं स्थानमा छन् । त्यस्तै, बलिङतर्फ नै नेपालका बसन्त रेग्मीले पनि वरियता सुधार गरेका छन् । उनी ७१ औं स्थानमा छन् । त्यस्तै, आईसीसीका अनुसार सन्दीप लामिछानेले पनि वरियतामा ३६ स्थान सुधार गर्दै १५९ औं स्थानमा आइपुगेका हुन् ।
अलराउन्डरतर्फ कप्तान पारस खड्काले ४० औं स्थानमा उक्लिएका छन् । पारसले ७६ रेटिङ अंक पाउँदै ४० स्थानमा पुगेका हुन् । ब्याटिङतर्फ भने कप्तान पारस ९० औं स्थानमा छन् । टि–ट्वान्टी क्रिकेटको ब्याटिङ वरियताको शीर्ष स्थानमा भने पाकिस्तानका बाबर अजाम बलिङतर्फ अफगानिस्तानका युवा बलर राशिद खान र अलराउन्डरमा अष्ट्रेलियाका ग्लेन म्याक्सवे यथावत छन् ।
Tags : #Sompal Kami #Paras Khadka #Sandeep Lamichhane #Basant Regmi